Yekutenda Yekunamata Points YeGore Idzva 2021 | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Yekutenda Yekunamata Points YeGore Idzva 2021
Yekutenda Yekunamata Points YeGore Idzva 2021
Nhasi tichange tichitarisana neminamato yekuonga yekutenda yegore idzva ra2021. Tinofanira kudzidza kupa rutendo kuna Mwari mune ese mamiriro. Chokwadi ndechekuti isu tinogona kubvunza kwete zvinoenderana nababa. Nekudaro, isu hatigone kupa kutenda munzira isiriyo. Sezvineiwo, kuonga kunovhura makomborero mazhinji. Ngatitorei nekukurumidza tora chirevo kubva parugwaro, nyaya yeanegumi maperembudzi.
Jesu Kristu akaporesa vane maperembudzi gumi, asi mumwe chete ndiye akadzoka kuzopa kutenda kuna Mwari. Iko kune kuwedzera kwakakosha kwemaropafadzo kana tichipa kutenda. Nepo minamato ine simba ine simba ichivhura maropafadzo edu, kutenda kunoita kuti maropafadzo iwayo ave ekupedzisira. Kupa kurumbidzwa kuzita raIshe chimwe chinhu icho munhu wese anofanira kutevedzera.
Mwari akatumidza Abhurahama kuti shamwari yake nokuti Abhurahama akapa chibayiro, uye akati hapana zvaaizoita asina kuudza shamwari yake Abhurahama. Mumwe angafunga kuti Abhurahama achave murume ane nzvimbo yakanyanya kunaka mumoyo maMwari mushure meMwari iye shamwari yake Isaya 41: 8 Asi iwe, Israeri, muranda wangu, Jakobho, wandakasarudza, vana vaAbrahama, shamwari yangu. Nekudaro, pane peculiarity muhupenyu hwaDavidi. Mwari vakati David murume anemoyo wake. Nepo Abrahama ari shamwari yaMwari, David akatowana nzvimbo yepedyo mumoyo maMwari. Mabasa 13: 22 Mushure mekubvisa Sauro, akaita Dhavhidhi mambo wavo. Mwari akapupura pamusoro pake, akati, Ndawana Dhavhidhi waJese, murume anofadza moyo wangu; achaita zvese zvandinoda kuti aite. ' Kurumbidzwa kuna Mwari kunovhura musuwo wemukana mukuru uye kunoita kuti munhu ave pedyo naMwari.
Mwari vanokoshesa munhu nemoyo wekutenda. Hakuna mukadzi asingabereki muIsreal kunze kweuyo akatuka Mambo David apo aive achirumbidza Mwari nenzira inosetsa. Iwe neni tinofanirwa zvakare kuyedza kukanganwa zvinhu zvakaipa zvinoitika zvakatikomberedza uye kutarisa pane zvakanaka zvakaitwa naShe. Paunotanga kupa kutenda kuna Mwari, dai Kutenda kwako kugamuchirwe muzita raJesu.
Baba vekudenga, ndinokusimudzirai kuti muve nedziviriro pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nekuti hamuna kurega zano remuvengi richikunda ini. Ndinokutendai nekuti ndimi muchengeti wehupenyu hwangu. Ndinokukudzai nekuti ndimi Mwari uye tsitsi dzenyu ndedzekusingaperi, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nechipo cheruponeso. Ndinokutendai neruregerero rwemweya wangu rwakagoneswa kuburikidza nerufu nekusimbiswa kwaKristu. Ndinokutendai nekuti ndakaponeswa neropa rinokosha raJesu Kristu.
Baba, ndinokutendai nekuti Jehovha hamuna kutendera muvengi kuti andikunde. Ini ndinokusimudzira nekuti iwe wakachengeta zvivimbiso zveshoko rako izvo zvechokwadi ivo vanounganidza asi nekuda kwangu vachawira. Ndinokusimudzirai nekuti makanyadzisa muvengi pamusoro pehupenyu hwangu, Ishe zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe, ndinokutendai nekuti ndaona gore idzva ra2021. Ndinokutendai nekuti mhuri yangu yakwirawo. Ndinokutendai nekuti hamuna kutombondibvumidza kana imwe nhengo yemhuri yangu kuwira mukutambura kwaCovid-19. Ndinokutendai nekuti maoko enyu ekurapa akauya pandiri pandakanga ndakabatwa nechirwere. Ndinokudzai Jesu nekuti makatendeka kundikundikana.
Baba Ishe, ndinokutendai pamusoro penyika yangu Nigeria. Ndinokutendai nekuti hamuna kutendera nyika ino kuti iparadzwe nehondo. Ndinokutendai nekuti makachengeta rudo rwenyika ino mumoyo yevanhu, ndinokusimudzirai nekuti muchabatsira vatungamiriri vedu kuona hupenyu hwevanhu zvakanaka, baba regai zita renyu rikudzwe.
Ishe Mwari, rugwaro runoti hatifanire kunetseka pasina, asi muzvinhu zvese kuburikidza nekukumbira, minamato uye nekupa kutenda, tinofanira kuzivisa chikumbiro chedu kuna Mwari. Ishe, ndinokutendai nekuti muchagadzirisa zvese zvinondinetsa mugore ra2021.
Ndinokutendai nekuti dambudziko remuchato rakagadziriswa muna 2021, ndinokutendai nekuti basa rangu rakazadzikiswa muna 2021, ndinokutendai nekuti makandipa mbiri, ndinokutendai nekuti maoko enyu akanaka ari pandiri.
Ishe Jesu, rugwaro runoti tendai Ishe nekuti akanaka uye tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi. Ishe ndinokutendai nekuti makave makavimbika kwandiri nemhuri yangu. Ndinokutendai nekuti zvisinei nekusatendeka kwedu kwese, makaramba muchitidzivisa kubva pamusungo wevavengi.
Ishe Jesu, ndinokukudzai kuti muzadzikise chivimbiso chenyu murugwaro, makati hapana chombo chinorwa neni chinobudirira. Ndinokutendai nekuti hamuna kumborega chero museve wapfurwa nemuvengi uine simba pamusoro pangu. Ndinokutendai nekuti makandipa kukunda munzvimbo dzese dzandakatarisana nedambudziko.
Ndinokutendai nechipo, mati muchazadzisa zvandinoda maererano nehupfumi hwenyu mukubwinya. Ndinokutendai nekuzadzikiswa kweshoko iri. Ndinokukudzai nekuda kwemaropafadzo. Ndinokutendai nemaropafadzo asingaverengeke, ndinokutendai nemaropafadzo asingaverengeki.
Ishe, ndinokutendai chaizvo nechipo cheupenyu. Ndinokutendai nekuti maoko enyu edziviriro aive pandiri. Kunyangwe ndichifamba mumupata wemumvuri werufu, handityi zvakaipa nekuti muneni.
Ishe, ndinokutendai nekuda kwegore ra2021. Ndinokutendai nekuti ndiri kuenda kuzoita hukuru hukuru mugore ra2021.
Ini ndinokusimudzira iwe nekuti iwe unobvumidza kuzadzisa zvese zvandakaisa zvinangwa zvinoenderana nekuda kwako uye chinangwa chehupenyu hwangu.
Baba, ndinokutendai nekuti muchashanda neni munzira dzakatokura kupfuura zvamakaita muna 2020. Ndinokutendai nekuti muna 2021, muchazviratidza kwandiri zvakanyanya kupfuura zvamakaita muna 2020.
Ndinokutendai nekuti hukama pakati pako neni huchaitwa huchawedzera hushamwari kupfuura zvese zvakamboitika, Ishe ngarikudzwe zita renyu.
Previous nyayaKunamatira Kubudirira Kwebhizinesi Muna 2021
inoteveraKunamatira Kuchengetedzwa kwaMwari Muna 2021
Joan Stanley Zvita 25, 2020 At 12:02 pm
MuZita raJesu, uye nesimba reRopa rake, ndinopa kutenda kukereke yaJesu Kristu iyo yaAnoda kwazvo, ndinopa kutenda kuti masuo egehena haagoni kukunda muviri waKristu Jesu, iva nesimba uye ushingi. hama nehanzvadzi, uye namata, Anotumira Hodhi dzake dzevatumwa kuti vauraye muvengi, kuti vakunde. Tinopa kutenda kuti Ishe ndiye mutungamiriri wedu, nekuti Anotirwira kurwira kwedu. Rumbidzai uye Rumbidzai Ishe wedu apo isu tichisimudza Zita raJesu pamusoro pemazita ese. Mbiri kuna Jehovha Mwari.
5 Mhando dzeGeneral Curses Uye Kune Mishonga YeBhaibheri
NEMUNYENGETERO WENYIKA YEMAKEROON
50 Inesimba Kunamatira Kumiririra Humambo hweRima